Waa kuwee waa ka wanaagsan yahay qaab, M2TS VS MP4
1.8 M2TS in wmv v
M2TS waa qaab oo loo isticmaalo qaabab audio iyo video multiplex. Durdurrada ugu badan ay yihiin kuwa ugu fiican u yaqaan for this taageero qaab waa Blu-Ray DVD iyo qaab AVCHD u kaamirada ah. Tani qaab ama kordhin ah waa mid aad u ballaaran baaxadda iyo sida caadiga ah waa inuusan marna waxaa lagu talinayaa in la helo qaab this wadaaga saaxiibada sida baaxadda aad u ballaaran. MP4 ayaa dhanka kale waxaa qaab ah in ay tahay in ay ahayd heerka si gaar ah qayb ka mid ah MPEG -4. Kordhinta waxaa loo isticmaalaa oo dhan files wixii MPEG-4 iyo waxa ku jira maqal iyo codec video gundhig dhexdeeda labada. Waa qaab aad loo jecel yahay ka mid ah dadka isticmaala ay sabab u tahay baaxadda yar oo badan oo kala duwan ciyaartoyda in ay taageeraan.
Waxaa jira qaababka qaarkood oo labada ka mid ah qaabab kor ku xusan leeyihiin iyo sabab la mid ah waxa aad u muhiim ah in la kala saaro iyaga. Faahfaahin ayaa lagu hoos ku xusan doonaa:
Waa kordhin file ah oo loo isticmaalo horumarinta disk Blu-Ray ah iyo sidoo kale AVCHD qaab oo loo isticmaalo in kaamirada ah. Weelka ay la xiriiraan la kordhiyo filename tani waa MPEG-2 gaadiidka weelka. Mar weel uu la xidhiidho ray Blu iyo kordhin fiidiyo arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale loo yaqaan qaabka weelka BDAV iyo sabab la mid ah waxaa la xiriira qalabka lagu kaydiyo kale sida DVD si fiican, drives adag iyo drives adke.
Size baakadda byte ayaa sidoo kale kordhay ugu yaraan 4 bytes si ay u hubiyaan in heerka la kulmay. Nidaamka helaan content Advanced waxa kale oo isticmaala horumarinta iyo saarayaasha ray Blu ka disk si loo hubiyo in xogta la Windows XP iyo natiijada ugu fiican ee bandhigo arrintan la xiriira. Waxaa jira dhowr ka mid ah ciyaartoyda oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in qaabka m2ts waxaa ciyaaray iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in ciyaartoyda oo taageera qaabka inta badan waxaa loogu talagalay in sidan oo kale ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user sida ay design weliba hubinayaa in xogta decrypted iyo Windows XP, waxaa kale oo ay taageereen. Ciyaartoyda ugu muhiimsan oo si fiican u yaqaan in waxa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira waa VLC, Pot Player iyo ciyaaryahan oo dhan. Ciyaartoyda Xtreme, PS3 Sony iyo TV Sony Bravia waa kuwa sidoo kale taageeri kordhin faylka.
Waa mid ka mid ah qaabab ugu badan in inta badan ay u taageeraan audio iyo video qaabab laakiin qaabab kale ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si loo hubiyo in faa'iidooyinka MP4 yihiin riyaaqay. Weli sawirada iyo subtitles sidoo kale qaar ka mid ah noocyada kale ee warbaahinta in ay yihiin oo ay taageerayaan qaab MP4 ah. Waa weelka ugu badan waxaa loo arkaa sida mid ugu dambeeyay sabab u ahaa xaqiiqada ah in aan taageerayn uun geeyo internet laakiin size sidoo kale waa wax aad u yar in la wadaago saaxiibada iyo dadka kale waa u fududahay.
MP4 sidoo kale loo isticmaalaa sida mid ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee ah in ciyaaryahan WM taageertaa. Faa'iido kale ah in loo arkaa in ay aad muhim u tahay in ay inta badan ciyaartoyda taageeraan qaabka iyo jirin ciyaaryahan gaar ah ayaa loo baahan yahay ka duwan m2ts. Ciyaartoyda oo taageera qaabka loo yaqaan MP3 players oo ay tahay xaqiiqo dhab ah oo caadi ah in inta badan ciyaartoyda in lagu horumariyo by shirkadaha adduunka oo dhan ayaa mp3 shaqeynta gundhig iyaga gudaha iyo sabab la mid ah qaab MP4 ah ma aha wax adag inuu u ciyaaro oo dhan. Daabacaaddii koowaad ee qaabka la bilaabay sannaddii 2001 iyo sii daayo ka xasilloon la bilaabay sannaddii 2003 iyo waa mid ka mid ah in la isticmaalo ilaa hadda la kaliya qayb ka mid ah beddelka laakiin erey-weelka iyo qeexidda la xiriira ayaa weli ah isla.
Shan Talooyin Isticmaalka Tubidy sida khabiir ku ah!
Top 5 URL in MP4 Online converters
MP3 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MP3 iyo MP4
> Resource > MP4 > Waa kuwee qaab waa ka sii wanaagsan, M2TS VS MP4